Tsigira Uchangamire hwaJehovha Mwari! | Yokudzidza
Jehovha Anotinyaradza Pakutambudzika Kwedu Kwose
Isa Mwoyo Wako Papfuma Yekunamata
Usangotarisa Zvakaita Munhu Nechekunze
Muchagadzirisa Kusanzwisisana Moita Kuti Pave Nerugare Here?
“Kuchenjera Kwako Ngakukomborerwe!”
Ramba Wakaisa Pfungwa Dzako Panyaya Inokosha
Tsigira Uchangamire hwaJehovha!
Nharireyomurindi—Yekudzidza | June 2017
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Jehovha, imi Mwari wedu, makakodzera kuti mugamuchire kukudzwa nokuremekedzwa nesimba, nokuti makasika zvinhu zvose.”—ZVAK. 4:11.
NZIYO: 12, 150
Nei Jehovha ari iye akakodzera kuva Changamire wezvinhu zvese?
Nei utongi hwaJehovha huri ihwo hwakanakisisa pane hwese hungavapo?
Tingatsigira sei uchangamire hwaJehovha iye zvino?
1, 2. Mumwe nemumwe wedu anofanira kuva nechivimbo chei? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
SEZVIRI munyaya yakapfuura, Dhiyabhorosi anoti Jehovha haana kukodzera kutonga vanhu uye kuti zviri nani kuti vazvitonge vega. Ichokwadi here ichocho? Ngatitii vanhu vakasarudza kuzvitonga vanogona kurarama nekusingaperi. Vaizofara here kupfuura zvavaizoita vachitongwa naMwari? Iwe waizowedzera kufara here kudai waizorarama nekusingaperi usingatongwi naMwari zvachose?
2 Hapana anogona kukupindurira mibvunzo iyoyo. Munhu mumwe nemumwe anofanira kufungisisa nyaya yacho. Paanoita izvozvo, zvinofanira kuva pachena kuti utongi hwaMwari hwakanaka. Ndihwo utongi hunopfuura hwese. Hwakakodzera kutsigirwa nesu nemwoyo wese. Bhaibheri rinotipa zvikonzero zvekuti tive nechivimbo chakadaro. Semuenzaniso, ona zvarinotaura nezvekukodzera kweuchangamire hwaJehovha.
JEHOVHA ANE KODZERO YEKUTONGA
3. Nei Jehovha ari iye chete akakodzera kuva Changamire?
3 Jehovha ndiye ane kodzero yekuva Changamire wezvinhu zvese nekuti ndiye Mwari wemasimbaose uye Musiki. (1 Mak. 29:11; Mab. 4:24) Muapostora Johani akaratidzwa madzimambo 144 000 ari kudenga achiti: “Jehovha, imi Mwari wedu, makakodzera kuti mugamuchire kukudzwa nokuremekedzwa nesimba, nokuti makasika zvinhu zvose, uye nemhaka yokuda kwenyu zvakavapo uye zvakasikwa.” (Zvak. 4:11) Jehovha ane kodzero yekutonga vanhu nengirozi nekuti ndiye akasika zvinhu zvese.
4. Nei kupandukira uchangamire hwaMwari kuri kushandisa zvisiri izvo rusununguko rwekusarudza?
4 Satani haana chaakasika. Saka haana kana kodzero yekutonga. Iye nevanhu vaviri vekutanga vakaratidza kuzvikudza pavakapandukira uchangamire hwaJehovha. (Jer. 10:23) Ichokwadi kuti sezvisikwa zvine rusununguko rwekusarudza vaigona kusarudza kusatongwa naMwari. Asi izvozvo zvaivapa kodzero yekupandukira Mwari here? Kwete. Rusununguko rwekusarudza runoita kuti vanhu vakwanise kuita zvisarudzo zvakanaka zuva nezuva. Zvisinei, haruvapi kodzero yekupandukira Musiki wavo akavapa upenyu. Zviri pachena kuti kupandukira Jehovha kushandisa zvisiri izvo rusununguko rwekusarudza. Vanhu vanofanira kuva pasi peutongi hwaJehovha hwakarurama.
5. Nei tichigona kuva nechokwadi chekuti zvisarudzo zvaMwari zvakarurama?
5 Pane chimwe chikonzero chinoratidza kuti Jehovha ane kodzero yekuva Changamire. Anoshandisa simba rake zvakanyatsorurama. Anoti: “Ndini Jehovha, Iye ane mutsa worudo, kururamisira nokururama panyika; nokuti ndinofarira zvinhu izvi.” (Jer. 9:24) Haashandisi mitemo yevanhu kuti aone kuti zvakarurama ndezvipi. Ndiye anototaura kuti zvakarurama ndezvipi. Mwari pachake anoruramisira uye izvozvo ndizvo zvakaita kuti ape vanhu mitemo. ‘Kururama nokururamisira ndizvo faundesheni yechigaro chake choumambo,’ saka tinogona kuva nechivimbo chekuti mitemo yake, mazano ake uye zvisarudzo zvake zvese zvakarurama. (Pis. 89:14; 119:128) Satani akati Jehovha haasi mutongi akarurama, asi iye Satani atadza kuita kuti pave nenyika inogara iine kururamisira.
6. Nei Jehovha aine kodzero yekutonga nyika?
6 Uyewo Jehovha ane kodzero yekuva Changamire nekuti ndiye ane ruzivo neuchenjeri hwekuchengetedza zvinhu zvaakasika. Semuenzaniso, Mwari akaita kuti Mwanakomana wake arape zvirwere izvo vanachiremba vaitadza kurapa. (Mat. 4:23, 24; Mako 5:25-29) Kuna Jehovha izvi zvaisava zvishamiso. Anonzwisisa zvakaita muviri wemunhu uye anokwanisa kugadzirisa chero chii zvacho chinenge chakanganisika. Anokwanisawo kumutsa vakafa nekudzivirira njodzi dzinongoitika dzega.
7. Nei uchenjeri hwaJehovha huchipfuura nekure uchenjeri hwenyika inotongwa naSatani?
7 Nyika iri kutongwa naSatani haikwanisi kuita kuti pasi pano pave nerugare. Jehovha chete ndiye ane uchenjeri hunodiwa kuti pave nerugare. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Patinodzidza nezveruzivo uye uchenjeri zvina Jehovha, tinonzwa sezvakaita muapostora Pauro uyo akafemerwa kunyora kuti: “Haiwa, pfuma yaMwari nouchenjeri nezivo zvakadzama sei! Kutonga kwake hakugoni kuongororwa sei uye nzira dzake hadzigoni kurondwa sei!”—VaR. 11:33.
UTONGI HWAJEHOVHA HUNOPFUURA HUMWE HWESE
8. Chii chinokufadza pamatongero anoita Jehovha?
8 Bhaibheri rinoratidza kuti Jehovha ane kodzero yekutonga. Rinoratidzawo kuti nei uchangamire hwake huchipfuura humwe hwese. Chimwe chikonzero ndechekuti anotonga nerudo. Matongero aanoita anofadza mwoyo yedu. “Ane ngoni nenyasha, anononoka kutsamwa uye azere nomutsa worudo, nechokwadi.” (Eks. 34:6) Mwari anoremekedza vanhu vanomushumira. Anotichengeta kupfuura kuzvichengeta kwatingazviita isu pachedu. Kusiyana nezvakataurwa naDhiyabhorosi, Mwari haanyimi vanamati vake vakatendeka chero chii zvacho chakanaka. Akatotipa Mwanakomana wake anokosha kuti tigone kuva netariro yeupenyu husingaperi!—Verenga Pisarema 84:11; VaRoma 8:32.
9. Tinoziva sei kuti Mwari anotida semunhu mumwe nemumwe?
9 Jehovha anoda vanhu vake seboka. Asi anotidawo semunhu mumwe nemumwe. Funga zvakaitika kare Jehovha paaipa vatongi simba rekununura vaIsraeri kubva kuvadzvinyiriri. Panguva iyoyo zvinhu pazvainge zvisina kugadzikana, haana kutadza kucherechedza mumwe mukadzi aisava muIsraeri ainzi Rute, uyo akanga asiya zvinhu zvakawanda kuti ave munamati wechokwadi. Jehovha akakomborera Rute nekumupa murume uye mwanakomana. Asi handizvo zvega. Paachamutswa, Rute achaziva kuti Mesiya aiva muzukuru wake. Uye fungidzira kufara kwaachaita paachaziva kuti nyaya yeupenyu hwake yakanyorwa mubhuku reBhaibheri rine zita rake!—Rute 4:13; Mat. 1:5, 16.
10. Nei tichigona kutaura kuti utongi hwaJehovha hauna udzvinyiriri?
10 Utongi hwaJehovha hauna udzvinyiriri. Hunotibvumira kuti tive nerusununguko uye hunoita kuti tive nemufaro. (2 VaK. 3:17) Dhavhidhi akataura nezveutongi hwaMwari achiti: “Kukudzwa nokubwinya zviri pamberi pake [Mwari], simba nomufaro zviri panzvimbo yake.” (1 Mak. 16:7, 27) Saizvozvowo, munyori wepisarema Etani akanyora kuti: “Vanofara vanhu vanogona kushevedzera vachifara. Haiwa Jehovha, ivo vanoramba vachifamba muchiedza chechiso chenyu. Vanofara zuva rose nokuda kwezita renyu uye vanokwidziridzwa mukururama kwenyu.”—Pis. 89:15, 16.
11. Tingasimbisa sei chivimbo chedu chekuti utongi hwaJehovha hunopfuura humwe hwese?
11 Kugara tichifungisisa nezvekunaka kwaJehovha kunogona kusimbisa chivimbo chedu chekuti utongi hwake hunopfuura humwe hwese. Tinosvika pakunzwa sezvakaita munyori wepisarema uyo akati: “Zuva rimwe chete muzvivanze zvenyu rinopfuura ane chiuru kune imwe nzvimbo.” (Pis. 84:10) Sezvo ari Musiki wedu, Jehovha anoziva zvatinoda kuti tive nemufaro wechokwadi. Anotipa zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tifare. Zvese zvaanoda kuti tiite zvinobatsira isu uye zvinoita kuti tive nemufaro mukuru. Ndizvo zvazviri kunyange zvazvo tichifanira kusiya zvimwe zvinhu kuti tiite zvaanoda.—Verenga Isaya 48:17.
12. Chii chinonyanya kuita kuti tide kutsigira uchangamire hwaJehovha?
12 Bhaibheri rinoratidza kuti kana Kutonga kwaKristu Kwemakore 1 000 kwapera, vamwe vanhu vachasarudza kupandukira uchangamire hwaJehovha. (Zvak. 20:7, 8) Chii chingaita kuti vadaro? Hapana mubvunzo kuti Dhiyabhorosi, uyo achange asunungurwa uye aine chinangwa chekutsausa vanhu, achaita kuti vanhu vangofunga zvakavanakira chete. Ndizvo zvaagara achiita. Angaita kuti vanhu vafunge kuti vanokwanisa kurarama nekusingaperi vasingateereri Jehovha. Asi izvozvo hazvimbofi zvakaitika. Zvinokosha kuti tizvibvunze kuti: Tichatorwa mwoyo nenhema idzodzo here? Kana tichida Jehovha uye tichimushumira nemhaka yekuti ndiMwari akanaka uye kuti ndiye akakodzera kuva Changamire wezvinhu zvese, tichasemburwa nenhema dzakadaro. Hatizombofi takada kurarama tisiri pasi peuchangamire hwaJehovha, uyo anotonga nerudo.
RAMBA UCHITSIGIRA UCHANGAMIRE HWAJEHOVHA
13. Tingaratidza sei kuti tinotsigira uchangamire hwaJehovha?
13 Tinofanira kutsigira uchangamire hwaJehovha nemwoyo wese. Sezvataona, ane kodzero yekutonga uye utongi hwake hunopfuura humwe hwese. Tinogona kutsigira uchangamire hwaJehovha kuburikidza nekuramba takaperera kuna Mwari uye kumushumira takatendeka. Ndezvipi zvimwe zvatingaita kuti tiratidze kuti tinohutsigira? Tinogona kuhutsigira kuburikidza nekuramba takavimbika kuna Jehovha uye kumutevedzera. Patinoita zvinhu sezvaizoita Jehovha, tinoratidza kuti tinoda uye tinotsigira utongi hwake.—Verenga VaEfeso 5:1, 2.
14. Vakuru nemisoro yemhuri vangatevedzera sei Jehovha?
14 Tinodzidza muBhaibheri kuti Jehovha anoshandisa simba rake zvine rudo. Saizvozvowo, misoro yemhuri nevakuru vanoda uchangamire hwake havazomanikidzi vamwe kuti vaite zvavanoda, sekunge kuti vatovawo vanachangamire. Pane kudaro, vachatevedzera Jehovha. Pauro aiva muenzaniso wakanaka pakutevedzera Mwari neMwanakomana wake. (1 VaK. 11:1) Pauro aisanyadzisa vamwe kana kuvamanikidza kuita zvakanaka. Asi aivakurudzira kuti vaite zvakanaka. (VaR. 12:1; VaEf. 4:1; Fir. 8-10) Izvozvo ndizvo zvinoitwa naJehovha. Saka ndizvo zvinofanira kuitwawo nevese vanoda uye vanotsigira utongi hwake.
15. Tinoratidza sei kuti tinoda utongi hwaJehovha?
15 Tinoona sei vaya vakapiwa simba naMwari? Kana tikavateerera tichivaremekedza, tinoratidza kuti tinotsigira uchangamire hwaJehovha. Kunyange patinenge tisinganyatsonzwisisi chimwe chisarudzo kana kuti tisingabvumirani nacho, tinotsigira urongwa hwaJehovha. Izvi zvakasiyana nezvinoitwa nenyika, asi ndiwo mararamiro anoitwa nevanhu vari pasi peutongi hwaJehovha. (VaEf. 5:22, 23; 6:1-3; VaH. 13:17) Tinobatsirwa nekuita izvozvo nekuti Mwari anoda kuti zvinhu zvinyatsotifambira zvakanaka.
16. Vatsigiri veuchangamire hwaJehovha vanoita sei zvisarudzo?
16 Tinogonawo kuratidza kuti tinotsigira uchangamire hwaMwari nezvisarudzo zvatinoita. Jehovha haatipi mitemo yekutevedzera pachinhu chimwe nechimwe. Pane kudaro, anotiudza mafungiro ake. Semuenzaniso, haana kunyora pasi mbatya dzese dzinofanira kupfekwa nevaKristu nedzavasingafaniri kupfeka. Pane kudaro, anoratidza kuti anoda kuti tisarudze zvitayera zvembatya zvine mwero uye zvakakodzera vashumiri vechiKristu. (1 Tim. 2:9, 10) Anodawo kuti tisakanganisa vamwe kana kuvavhiringidza nezvisarudzo zvedu. (1 VaK. 10:31-33) Patinoita zvisarudzo maererano nemafungiro aJehovha, tinoratidza kuti tinoda uye tinotsigira utongi hwake.
Tsigirai uchangamire hwaMwari pakuita zvisarudzo uye pane zvamunoita mumhuri (Ona ndima 16-18)
17, 18. Vakaroorana vanoratidza sei kuti vanotsigira uchangamire hwaJehovha?
17 Funga kuti vaKristu vakaroorana vanogona kutsigira sei uchangamire hwaJehovha. Vakaroorana vangasangana nezvinhu zvavaisatarisira kana kuti vangatova nematambudziko akakura. Pakadaro vanogona kufungisisa mabatiro aiita Jehovha vaIsraeri. Rudzi rwevaIsraeri rwainge rwakaita semudzimai wake uye iye ainge akaita semurume kwavari. (Isa. 54:5; 62:4) VaIsraeri vakarwadzisa Jehovha kakawanda. Ukama hwavo naMwari hwaiita sewanano ine matambudziko. Asi Jehovha haana kuda kukurumidza kudambura ukama hwake navo. Aigara achinzwira vanhu vacho tsitsi uye akaratidza kuti akavimbika kuburikidza nekuchengeta sungano yaakaita navo. (Verenga Pisarema 106:43-45.) Rudo rwakavimbika rwakadaro runotiswededza pedyo naJehovha.
18 Saizvozvowo, vakaroorana vanoda Jehovha vanomutevedzera. Kana zvinhu zvaoma muwanano havatsvagi nzira inopesana neMagwaro kuti vadimbure muchato. Vanoziva kuti Jehovha akavasunga pajoko pamwe chete uye kuti anoda kuti varambe vari vese. Unzenza hwepabonde ndihwo chete chikonzero chemuMagwaro chekurambana chingaita kuti mumwe asununguke kupindazve mune imwe wanano. (Mat. 19:5, 6, 9) VaKristu vanotsigira uchangamire hwaJehovha pavanoita zvese zvavanogona kuti wanano yavo ibudirire.
19. Tinofanira kuitei kana tikakanganisa?
19 Sezvo tiine chivi, dzimwe nguva tichaita zvinhu zvinorwadzisa Jehovha. Izvi anozviziva, ndosaka akatipa rudzikinuro rwaKristu. Saka patinokanganisa, tinofanira kukumbira kuregererwa naJehovha. (1 Joh. 2:1, 2) Pane kungoramba tichizvituka, tinofanira kudzidza kubva pane zvatakakanganisa. Kana tikaramba tiri pedyo naJehovha, achatiregerera uye achatibatsira kuti tinaye uye tikurire zvinhu zvakadaro mune ramangwana.—Pis. 103:3.
20. Nei tichifanira kutsigira uchangamire hwaJehovha iye zvino?
20 Munyika itsva yaMwari, vanhu vese vachava pasi peuchangamire hwaJehovha vodzidza nzira dzake dzakarurama. (Isa. 11:9) Asi isu tiri kutodzidza nzira dzake iye zvino. Uye nyaya yeuchangamire iri kutogadziriswa. Ino ndiyo nguva yekutsigira uchangamire hwaMwari kuburikidza nekuperera kwaari, kumushumira uye kumutevedzera pane zvese zvatinoita.
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA June 2017
Copyright © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. MITEMO YEKUSHANDISA | CHISUNGO CHEPAMUTEMO CHEKUCHENGETEDZWA KWEMASHOKO AKAVANZIKA